Iinkqubo zestereo zemoto ze-Astra J ngo-2011/2014
Inkcazo:Iinkqubo zeStereo zeemoto zeAstra J,Indawo yemoto yeAustrra J,Iinkqubo zeeVenkile zeemoto
Home > Imveliso > I-Opel Imoto ye-Dvd ye-Android > Iinkqubo zestereo zemoto ze-Astra J ngo-2011/2014
Umzekelo No.: KD-1047
Iinkqubo zestereo yeemoto zika- Android 8.0 ze-Astra J 2011-2014
IiModeli zeMoto ezifanelekileyo kunye neMinyaka: Iinkqubo zestereo zemoto zeAstra J
1. Iinkqubo zeestereo zeemoto zeAustrra J eyakhelwe-ngaphakathi irediyo yeRSS ikunika izikhululo ze-18FM kunye ne-12AM kunye nokuhlaziywa okubukhoma;
2. Yakhelwe-ngaphakathi kwi-TDA7851L i-amplifier IC, ixhasa ukuphuma kwe-audio ye-subwoofer, kwaye iyilawula ngokwahlukileyo.Umveliso wokulalelwa komsindo: 4 X 50W;
3. Kule nkqubo yeestereo zemoto yeAstra J, inokukhupha phantse yonke into entlokweni yakho, nokuba udlala ividiyo usuka kwi-USB / SD / kwi-intanethi ividiyo, Iiyunithi ezininzi zentloko kwimarike zinokukhupha kuphela ividiyo ye-DVD ukuya kwi-headrest;
4. Itekhnoloji ye-wireless ye-Bluetooth ikunceda ukuba udlale umculo kwiifowuni zefowuni ezinje ngeSpotify okanye iPandora, kunye nokwenza umnxeba ngokukhululekileyo xa uqhuba. Ngaphandle kokuxhasa ukuboniswa kolwazi lwengoma kunye nencwadi yefowuni, iyunithi yentloko ikwaxhasa ukukhangela abafowunelwa ngokukhawuleza;
5. Ukuguqula iikhamera zibe nokuzithemba xa ujika umva. Ukujika iikhamera kukunceda ubone ngokucacileyo ukuba yintoni na engemva kwakho. Ikhamera yokuzikhethela efunekayo;
6. Ingcaciso ephezulu inikezela ngesisombululo somqhaphu, esandisa amava akho ezimoto ngaphakathi;
7. Iiphaneli zamaqhosha umbala we-RGB ziyafumaneka, unokuwuguqula ngokukhululekileyo ukuze utshatise imoto yakho;
8. Yijikeleze isipili kwifowuni yakho kwi-9 inches .Kumnxeba we-Android, unokujonga esipilini kunye nolawulo kwiyunithi ngocingo lwe-USB, umoya odlala kwi-iPhone, unokujonga nje kwigumbi ngesixhobo sokudibanisa i-wifi, awukwazi ukulawula;
9. I- DVR yangaphandle ye-DVR inceda ukurekhoda iihambo zakho zongezo lwengqondo, ekugqibeleni ukuphucula ukhuseleko lwakho nokhuseleko ezindleleni zethu ezixakekileyo. Inketho ye-DVR efunekayo;
10. Ukuguqula iikhamera zinokuzithemba xa uguqula umva. Ukujika iikhamera kukunceda ubone ngokucacileyo ukuba yintoni emva kwakho. Ikhamera yokuzikhethela efunekayo;
11. I- OBD Fumana kwakhona idatha yexesha langempela, kwifomathi elula yokufundwa, ekuvumela ukuba uqonde naziphi na iingxaki ngekhompyuter yakho.
iiyunithi zentloko yerediyo yemoto ye-MOKKA 2017 Qhagamshelana Ngoku
I-Astra J 2011-2012 umdlali we-auto multimedia dvd player Qhagamshelana Ngoku
Iinkqubo ezi-2 ze-multimedia ye-INSIGINA 2009-2012 Qhagamshelana Ngoku
Iinkqubo zeStereo zeemoto zeAstra J Indawo yemoto yeAustrra J Iinkqubo zeeVenkile zeemoto Iinkqubo zeStereo zeemoto ze-GX7 2014 Inkqubo yeStereo yeemoto zeMALIBU Inkqubo yeMultimedia yeemoto yeAstra J Inkqubo yeStereo yemoto Iinkqubo zeSX4 Stereo yeeMoto